लुटबहादुरले १५ वर्ष शासन चलाएको कोहलपुरमा अबको मेयर को ?
- जनक नेपाल | काठमाडाैं, चैत १९
पश्चिम तराईको उदाउँदो शहर कोहलपुरका मेयर हुन्, लुटबहादुर रावत । नाम लुटबहादुर भए पनि नगरमा उनको परिचय सरल, सादगी र इमान्दार जनप्रतिनिधिको छ । त्यसैले त उनीमाथि नगरबासीले २०४९ सालदेखि निरन्तर भरोसा गर्दैआएका छन् ।
७४ वर्षीय रावत आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय शासनमा तेस्रो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदैछन् । ‘मैले क्षमताले भ्याएसम्म नगरबासीको सेवा गरेँ । स्याल कराउने गाउँलाई सम्भावना बोकेको शहर बनाएँ’, शिलापत्रसँग उनले भने, ‘पूर्ण इमान्दारिताका साथ काम गरेँ । पार्टी र जनताको विश्वास टुट्ने कुनै काम गरिनँ ।’
अघिल्ला दुई कार्यकालको तुलनामा पछिल्ला पाँच वर्ष उनका लागि चुनौतीपूर्ण थिए । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नु सीमित अधिकार र साधनस्रोतको गाउँ विकास समिति हाँकेजस्तो सजिलो थिएन् । ‘गाविसमा थोरथोरै बजेट हुन्थ्यो । नचाहेर पनि पूर्वाधार विकासमा माथिको मुख ताक्नुपर्थ्यो’, मेयर रावत सुनाउँछन्, ‘अहिले बजेटको खास समस्या छैन । राजनीतिक खिचातानी ज्यादा छ ।’
कोहलपुर कार्यपालिकामा एमालेको एकल बहुमत छ । उपमेयरसहित बलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस छ भने माओवादी केन्द्रको उपस्थिति पनि सशक्त छ । आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै पनि ससाना कुरामा विवाद झिकेर विपक्षीले असहयोग गरेको रावत बताउँछन् । तैपनि, बाँकेको पहिलो साक्षर पालिका, हरेक वडामा आफ्नै भवनमा स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नती तथा दरबन्दी मिलान, कबर्ड हल, क्रिकेट मैदान, लामो दूरीको बसपार्क निर्माण, भ्यू टावर र उज्यालो कोहलपुर बनाउन सकेकोमा उनी सन्तुष्ट छन् । ‘अझै धेरै काम हुन सक्थे । संघीयताको पहिलो कार्यकाल भएकाले हामी अल्मलिएकै हो । अब कानुन बनिसके, आउने स्थानीय सरकारलाई सहज हुनेछ’, उनले भने ।
मेयर रावत २०४९, २०५४ र २०७४ का स्थानीय चुनावमा एमालेबाट कोहलपुरमा निर्वाचित भए । उनको १५ वर्षे स्थानीय शासनकालप्रति भने मिश्रित प्रतिक्रिया छन् । अघिल्ला दुई कार्यकालको तुलनामा पछिल्लो कार्यकाल कमजोर रहेकोभन्दै पार्टीभित्रै उनको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । तर, उनको व्यक्तिगत व्यवहार र इमान्दारिताप्रति भने पार्टीभित्र वा बाहिर कमैले मात्र प्रश्न उठाएका छन् ।
‘पाको उमेर भए पनि उहाँको सक्रियता र उर्जा प्रेरणादायी छ’, उपमेयर सन्जुकुमारी चौधरी भन्छिन्, ‘पुस्ताकै ग्याप भएर हो कि, नयाँ तरिकाले नगरपालिकालाई लैजान भने सकिएन । जे कुरामा पनि राजनीतिकरण भयो ।’
विकासका साझा मुद्दामा समेत पार्टीगत आँखाबाट हेरिएको उपमेयर चौधरीको गुनासो छ । सर्वसम्मत हुनुपर्ने निर्णयसमेत बहुमतको बलमा जर्बजस्ती भएको टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्, ‘यो कार्यकाल कस्तो भयो, मूल्यांकन त जनताले गर्लान् । तर, जनताको नजिकको साथी बनेर विकासको खाका कोर्ने काम भने भयो ।’
मेयरमा रावतसँग पराजित माओवादी केन्द्रका नेता नरेन्द्र न्यौपाने भने कोहलपुरलाई नविन ढंगले अगाडि बढाउन लुटबहादुरको टिम असफल भएको आरोप लगाउँछन् । ‘सम्भावना बोकेको शहर हो । नविन ढंगले विकास योजना ल्याउन सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘जुनसुकै सूचकबाट हेर्दा पनि कोहलपुर नगरपालिकाले राम्रो गरेको देखिन्न ।’
यी हुन् मेयरका आकांक्षी
रावत १५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भइरहँदा कोहलपुरको मेयरमा २०७४ को निर्वाचनका प्रतिद्वन्द्वीहरू नै उम्मेदवारीको दौडमा छन् । कांग्रेसका भानुभक्त भट्टराईलाई ८० मतको अन्तरले रावतले हराएका थिए । रावत ९ हजार ४ मतसहित विजयी हुँदा निकटम् प्रतिद्वन्द्वी भट्टराईले ८ हजार ९ सय २४ मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट यसपटक पनि भट्टराईको सशक्त दाबेदारी छ ।
उपमेयर सन्जुकुमारी चौधरी स्वभाविक दाबेदारका रूपमा मेयरको आकांक्षी छिन् । ‘उपमेयरका रूपमा मैले सक्दो जनतासँग नजिक भएर काम गरेँ । अब मेयरका रुपमा सेवा गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत जनाधार पनि छ भन्ने लाग्छ’, बाँके कांग्रेसकी सचिवसमेत रहेकी चौधरीले भनिन्, ‘यो मेरो इच्छा हो । पार्टीले सोचविचार गरेरै निर्णय गर्ला ।’
त्यस्तै, स्थानीय व्यवसायी चिन्तामणि धिताल पनि कोहलपुरको मेयरका अर्का सशक्त दाबेदार हुन् । स्थानीय नेता बलराम शर्माले पनि मेयरका लागि आकांक्षा राखेका छन् । कोहलपुर नगर विकास अध्यक्षसमेत रहिसकेका प्रदेश सदस्य टेकनारायण भुसाल कांग्रेसमा आन्तरिक एकता कायम गर्न सके कोहलपुर नगरपालिका जित्न अर्को गठबन्धन गर्नु नपर्ने बताउँछन् । ‘कोहलपुरमा कांग्रेस र एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धा छ । घात अन्तरघातबाट जोगिन सके कांग्रेसले एक्लै सजिलोसँग चुनाव जित्छ’, उनले भने ।
एमाले १५ वर्षदेखिको वर्चस्व जोगाउने रणनीतिमा छ । एमालेबाट नगर कमिटी अध्यक्ष खिलप्रसाद भुसाल र पूर्वअध्यक्ष बसन्ती अधिकारी मुख्य दाबेदार छन् । एमालेबाट जिल्ला कमिटी बाँकेका पूर्वसचिव गोपाल गिरीले पनि मेयरका लागि दाबी गरिरहेका छन् । भुसाल पार्टी विभाजनका बेला संगठन जोगाउन आफूले भूमिका खेलेको योगदानको कदर हुनेमा आशावादी छन् । नेतृ अधिकारी पनि नगर अध्यक्ष हाँकेर अघिल्लो पटक आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव जितेको स्मरण गर्दै मेयरको हकदार रहेको बताउँछिन् । ‘यसपटक पार्टी र सहकर्मी कमरेडहरूले मलाई मेयरका रुपमा अघि सार्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु’ उनले भनिन् ।
पार्टीले अधिकारीलाई अघिल्लो पटक उपमेयरका उठ्न आग्रह गरेको थियो । तर, उनले यसपटक चुनाव जिताउँछु र अर्को पटक मेयर उठ्छु भन्दै उपमेयरमा चुनाव लड्न मानेकी थिइनन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य ढकाल कोहलपुर एमालेको गढ भएकाले एकसेएक आकांक्षी रहेको बताउँछन् । ‘मेयरको उम्मेदवारको कमी छैन । एकसेएक कमरेडहरू योग्य हुनुहुन्छ’ बाँके इन्चार्जसमेत रहेका ढकालले भने, ‘पार्टीले योगदान, क्षमता र लोकप्रियता हेरेर कसैको चित्त नदुख्नेगरी निर्णय लिन्छ ।’
२०७४ को चुनावमा मेयर पदमा तेस्रो धेरै मत माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र न्यौपानेले ल्याएका थिए । सो पार्टीबाट उनी सर्वसम्मतजस्तै उम्मेदवार छन् । तर, सत्तारुढ गठबन्धन दलमध्ये कोहलपुर कसको भागमा पर्ला भन्ने अन्योल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा देखिन्छ । ‘कोहलपुरमा माओवादीको दाबी छ । हामी एक्लै जित्नेगरी तयारी गरिरहेकाले छाड्न सक्दैनौँ’, न्यौपानेले भने ।
गत निर्वाचनमा बाँकेका आठ पालिकामध्ये माओवादीले कतै पनि चुनाव जित्न सकेको थिएन । खजुरा गाउँपालिकामा निकटम् प्रतिद्वन्द्वी रहेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनका लागि अघि सारेको मोडालिटीमा विगतमा जितेकोमा उसैलाई र एमालेले जितेका ठाउँमा निकटम् प्रतिद्वन्द्वीलाई टिकट दिने भन्ने छ । त्यस हिसाबले कोहलपुर कांग्रेस र खजुरा माओवादी केन्द्रले पाउँछ ।
कोहलपुरका मेयर आकांक्षी न्यौपाने भने त्यस्तो निर्णय अमान्य हुने बताउँछन् । ‘त्यस्तो गठबन्धन गरेर कामै छैन । गठबन्धन आवश्यकताका आधारमा गर्ने हो’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘२०७४ मा तेस्रो भएको पार्टी अहिले पहिलो हुन सक्दैन ? हामीले कोहलपुरमा धेरै मिहिननेत गरेर संगठन सुदृढ गरिसकेका छौँ । जब एक्लै जित्छौँ भने किन छाड्छौँ ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १९, २०७८, ११:४०:००